Kindleberry Pi ma ọ bụ mgbe Kindle na-ezute Utu Pi | Akụrụngwa n'efu
Kindleberry Pi ma ọ bụ mgbe Kindle na-ezute Raspberry Pi
Ndị SBC Rasberi Pi bọọdụ nwere ike iji ọtụtụ ọrụ. Ọ bụ ihe na - abụghị ihe ọhụụ, mana ọ bụ amaghị maka ọtụtụ iji jigharị eReaders ma ọ bụ nke akpọrọ ebook. Enwere ike ịbanye ọtụtụ n'ime ngwaọrụ ndị a ma jiri ya dị ka ihuenyo dị ike maka ọrụ anyị.
Ihe oru ngo a anyi na-ekwu okwu ya abughi ihe ohuru, ma ugbua ndi eReaders abughi "ejiji", enwere ike wu ya mini-kọmputa maka ihe mberede iji reji ngwaọrụ ochie.
A na-akpọ ọrụ ahụ Kindleberry Pi. Dị ka aha ahụ na-egosi, ọrụ ahụ dabere na iweghachi Amazon eReader, Kindle, na osisi Raspberry Pi. Kindleberry Pi bụ oru ngo nke na-eji Kindle dị ka elektrọnik ngosi ma ọ bụ nyochaa na nke n’egosi ihe obula nke Raspberry Pi n’ibu, di ka ihe nlere na komputa nke kwesiri. Ọ bụ eziokwu na mgbe ị na-eji eReader, ụfọdụ faịlụ dị ka vidiyo enweghị ike iji, mana ọ bụrụ na ọrụ anyị kwa ụbọchị dabere na ịgụ akwụkwọ, ọrụ ahụ nwere ike ịmasị ma dị mma maka anya anyị.
Kindleberry ga-eme ka anyị jigharịa ihe ochie ochie ma nweta elektrọnik ink
La gọọmentị webụsaịtị nke oru ngo dị ka onye ọ bụla na na mgbakwunye na ya ewu, anyị nwere ike nweta ihe dị mkpa ngwanrọ maka Amazon Kindle na-arụ ọrụ nke ọma. Ejiri Kindleberry Pi jiri isi Kindle na Ras Piberry Model B, ya bụ, ọ bụ ọrụ ochie mana ọ bara uru na ngwaọrụ Amazon ọ bụla yana ụdị ọhụụ nke Raspberry Pi.
Ma anyị nwere ike ọbụna jiri mbadamba Rasberi Pi Zero ma gbanwee oru ngo a na laptọọpụ kama nke mini desktọọpụ kọmputa. Ebe ọ bụ na e wuru ya na Pip Pi, anyị nwere ike ịme ọtụtụ mgbanwe na ịtọgharị anya dịka anyị chọrọ ma ọ bụ ihe ọmụma anyị na-enye anyị ohere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » Kindleberry Pi ma ọ bụ mgbe Kindle na-ezute Raspberry Pi